Izindaba - 2020 CBE eShanghai idokodo inombolo N4-H21
Ngo-2020, siya embukisweni we-CBE eShanghai kusuka ngoJulayi 8 kuya ku-12.
Sikhombisa imikhiqizo yethu eyinhloko, njengomshini wokugcwalisa i-lip gloss, umshini wokucindezela i-lip gloss mascara wokugcwalisa, umshini wokucindezela i-compact powder, umshini wokulebula ovundlile, i-packagings yezimonyo ye-lip gloss, i-lip balm, i-lipstick, i-mascara, i-eyeliner kanye necala elithile lesithunzi , ibhokisi eli-blush compact, izimbiza ze-powder ezikhululekile njalonjalo.
Futhi babuza imibuzo ethile mayelana nokuthi ungawugcwalisa kanjani kahle umascara we-lip gloss mascara kahle, njengokuthi ungawugwema kanjani umphefumulo womoya lapho ugcwalisa, ukuthi ungakugwema kanjani ukuconsa, ukuthi ungagwema kanjani ukulimala komshini wokwenza amakepisi aphuke, ukuthi ungalungisa kanjani ivolumu yokugcwalisa, isivinini sokugcwalisa, ungasetha kanjani isivinini sokubamba, i-capping torque, ukuthi ungayihlanza kanjani nokuthi ungaqinisekisa kanjani ukuthi umshini wethu wokugcwalisa i-lip gloss ukugcwalisa amabhodlela ohlobo nobukhulu ohlukile, noma ngabe umshini wethu wokugcwalisa i-lip gloss ungenziwa ngokushisa nokuxuba. Siphinde sihlole umshini wethu nge-lip gloss ukukhombisa ukunemba kwethu okuphezulu kokugcwalisa +/- 0.03g.
Kunamakhasimende okuthenga umshini wethu wokugcwalisa i-lip gloss khona lapho futhi ukhethe amashubhu amaningana wezindebe zokwethula uhlobo lomkhiqizo wabo omusha. Futhi kukhona ikhasimende elidinga umshini wokugcwalisa i-lip gloss owenziwe ngokwezifiso ngoshintsho oluningiliziwe, njengobude bomshini wokugcwalisa uhlobo lwe-push ukuqinisekisa isikhala esikhulu sokusebenza se-opharetha kanye nesivinini sokugcwalisa esiphakeme. Yonke imishini yethu yezimonyo yamukela izingxenye zomkhiqizo ezidumile ukuqinisekisa ukusebenza okuzinzile, iSwitch yiSchneider, i-Relays yi-Omron, iServo motor yiPanasonic, i-PLC yiMitsubishi, izingxenye ze-Pneumatic is I-SMC, Isikrini sokuthinta iMitsubishi, Isilawuli Sokushisa: I-Autonics
Uyemukelwa amakhasimende amasha namakhasimende amadala ukuvakashela iwebhusayithi yethu ukuthola ulwazi olusha kakhulu ngemishini yethu yezimonyo. Sisebenzisa imishini yethu yezimonyo ngokuya ngomshini wethu ojwayelekile futhi nangokuya ngezidingo zamakhasimende ngaso sonke isikhathi. Noma yimuphi umqondo ofuna ukuwufinyelela, wabelana nathi ngokukhululekile. Sikholelwa ukuthi sizoba nguzakwethu omuhle ebhizinisini futhi sibe ngabangane abahle.
Ukuhlanza ukusebenza komshini wokugcwalisa:
Ukuze kuqinisekiswe ukuqiniswa kokuhlanzwa kwemishini kanye nokubulala amagciwane ngesikhathi senqubo yokukhiqiza, hlinzeka ngemininingwane yokusebenza opharetha yokuhlanza nokubulala amagciwane, gwema ukungcoliswa komzimba kanye namakhemikhali, ukulawula ukungcoliswa kwamagciwane nokuqinisekisa ikhwalithi yomkhiqizo.
A. Qinisekisa ukuthi zonke izinto ezisemishini ziyasulwa ngaphambi kokuhlanzwa.
B. Umshini wokuwasha: Amanzi akhishiwe, okokuhlanza ikati elimhlophe, i-75% yotshwala.
C. Amathuluzi wokuhlanza: ibhulashi, isibhamu somoya.
D. Indwangu emhlophe kakotini icwilwa ku-75% yotshwala ukuze isetshenziswe.
E. Umkhiqizo ofanayo, izinombolo zamaqoqo ahlukahlukene, ukuhlanza, izingxenye zingasetshenziswa ngaphandle kokuqaqa.
F. Ama-opharetha asebenza ngokuya ngemininingwane yokusebenza yokuhlanza futhi aqinisekise ukuthi isinyathelo ngasinye sokusebenza sihlangabezana nezidingo ezibekiwe.
G. Umuntu ophethe ezokukhiqiza uzoqinisekisa ukuthi opharetha nabaqeqeshiwe abaqeqeshiwe basebenza ngokuya ngemininingwane yokusebenza, bagade futhi bahlole isimo sokuhlanza, futhi babhale phansi futhi basayine ngesikhathi esifanele.
Ngaphambi kokuhlanza, zonke izingxenye zidinga ukuhlukaniswa ngokuphelele ngefomula ehlukile nenombolo yombala.
A. Ukugcwaliswa sekuqediwe, imikhiqizo eseqedile ukukhishwa kwi-hopper futhi kufanele ihlanzwe.
B. Imishini ihlanziwe, kepha kufanele ihlanzwe futhi uma ingekho isonto lonke.
C. Uma kuchazwe ngokukhethekile ngamakhasimende nemikhiqizo, ukuhlanzwa kuzokwenziwa ngokuya ngemibhalo ekhethekile yamakhasimende nemikhiqizo.